LA QABSIGA COVID-19
Dad badan, aafada cudurku waa xilli walaac badan oo walwal ku abuuray bulshadeena, ehelkeena, iyo caafimaadkeena. Xog badan ka ogow waxa aad samayn karto iyo xogta ilaha aad caawimaada ka heli karto.
Ma u baahan tahay in qof la hadlo? >>
Markaad la kulanto dhacdooyin naxdin leh, sida masiibo dabiici ah ama aafada COVID-19, dadka intooda badan waxay muujiyaan calaamadaha istareeska. Tani waa wax caadi ah. Muddo kadib dareenadaan waa ka yaraadaan qofka. Intay kaa yaraanayaan, waxaa jiro waxyaabo aad samayn karto si aad istareeska iskaga yarayso.
Dhawr badqabkaaga caafimaadka
Cun cunto caafimaad leh oo biyo cab
Iska ilaali xaddiga badan ee kafeega iyo khamriga
Ha isticmaalin tubaako (sigarka iwm.) ama daroogooyin sharci darro ah
In kugu filan seexo oo naso
Samee jimicsi jireed
Adeegso qaabab farsamo ood u nasato
Nasi jirkaaga mar kasta adoo samaynaaya waxyaabo kugu haboon — neefsi dheer qaado, iskala fidi, iskala bixi, la falagal dabeecadaha raaxada leh, ama xataa wax fudud sida dhaqida wajigaaga iyo gacmahaaga.
U qaybi naftaada inta u dhaxaysa nashaadaadka walaaca badan oo samee wax baashaal ah kadib shaqo adag.
Adeegso waqti aad ku nasato — cun cunto fiican, wax akhri, dhagayso muusig, ama la hadal qoyskaaga
U sheeg dareenadaada ehelkaaga iyo saaxiibadaa markasta.
Dareen sii jirkaaga, dareenkaaga iyo ruuxdaada.
Aqoonso oo arag digniinaha hore ee istareeska.
Aqoonso sida khibradaha kusoo maray u saamaynayaan qaabka aad u xalinayso dhacdadaan kana fakar sida aad dhacdooyinkii hore u xalisay. Diirada saar qaababka aad u xalisay si waangsan.
Ogoow dareenka istareeska, niyad jabka, danbiilenimada ama xanaaqa uu yahay dhacdo naqdin leh oo badanaa dhacda.
Waqti geli dib u cusboonaysiinta ruuxdaada adoo nasanaaya, ducaysanaaya ama caawinaaya dadka kale ee baahan.
Meelaha aad ka heli kartid kaalmo (PDF)
wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan sida Si aad u maamulto kurbada (PDF)
macluumaadka caruurta (PDF)
Ma doonaysaa inaad qof la hadasho? Caawimaad ayaa la heli karaa.
Taleefan u dir taageero ammaan ah oo ku caawiya.
wac 651-288-0400 ama 877-404-3190
ama qoraal "taageero" la 85511
Adiga ama qof aad taqaano ma qabaa dhibaato caafimaadka dhimirka ah?
Si aad ula hadasho xirfadlayaal bilaash ah oo ku caawin kara:
Wac **CRISIS (274747) adoo ka wacaaya moobilka
Farriin qoraal erayga "MN" ugu dir 741 741
Ama wac khadka taleefoonka dhibaatada ee degmadaada si weyn u jawaab dhibaatada
Nambarada taleefanka gurmadka dhibaatada dadka waawayn
Nambarada taleefanka gurmadka dhibaatada carruurta
Ilo badan oo caawimaad baxsha
Warmlines MN oo ka helayo mentalhealthmn.org Wac 651-288-0400 ama 877-404-3190, fariin qoraal erayga "support" ugu dir 85511
Suicide ka Hortagga Lifeline: 800-273-TALK (800-273-8255).
Maamulka Adeegyada Dadweynaha ee xad-gudubka iyo Caafimaadka maskaxda (SAMHSA) ka Display Helpline: 800-985-5990
Gobolka Minnesota COVID-19 taageeradda caafimaadka maskaxda
Heshid bixiyaha xanaanada caafimaadka maskaxda ama shaqooyinka ku xirnaanta kiimakada